नारीलाई मात्र किन पति चाहिने ? - Himalayan Kangaroo
नारीलाई मात्र किन पति चाहिने ?
Posted by Himalayan Kangaroo | १९ भाद्र २०७३, आईतवार ०२:०९ |
–कामना न्यौपाने ।
तीजको व्रतको दिन,शिवजीको मन्दिर सेरोफेरोमा सधै महिलाहरु लामबद्ध देखिन्छन । जब प्रश्न तेर्सिन्छ , व्रत केको लागि ? तब अविवाहिताको उत्तर आउँछ, राम्रो वर पाउन । यस्तै विवाहिताको उत्तर आउछ,श्रीमानको दीर्घायुको लागि । तर मन्दिरको त्यो लाइनमा किन कुनै पुरुष आफ्नो श्रीमती या हुनेवालीका लागि बस्दैनन् ?
श्रीमतीले श्रीमानको आयू बढोस् भनि व्रत बस्दै गर्दा , श्रीमतीले श्रीमानको आयू बढोस् भनेर किन व्रत बस्दैनन् ? एउटा केटीले राम्रो वर पाइयोस भनि व्रत बस्दै गर्दा , एउटा केटोले राम्रो बधु पाइयोस भनि किन व्रत बस्दैन ? किनकी हाम्रो समाजमा पुरुष सधै पहिलो श्रेणीमा रहन्छ । श्रीमानको आयुले उसको श्रीमतीको रंगहरु निर्धारण गर्दछ । यदि श्रीमानको आयु छोटो भयो भने,बाँकी जिन्दगी श्रीमतीले रंगहीन बिताउनुपर्छ तर श्रीमतीको आयुले श्रीमानको आयूमा ठूलो असर गर्दैन । श्रीमतीको आयू छोटो भयो भने, उसले आफ्नो बाँकी जिन्दगी दोस्री,तेस्री श्रीमती भित्र्याएर बिताउन सक्छ । त्यस्तै अविवाहिताको सन्दर्भमा , लगनगाँठो कस्नको लागि लिईने निर्णय केटोले गर्छ । यसको अर्थ केटोले व्रत बस्नै पर्दैन, उसले त केटीहरुको मुल्यांकन गर्दै हिड्छ र जीवनसाथी चुन्छ । समाजले यसरी महिलामा डर पैदा गराइरह्यो र निरीह बनाइरह्यो र तीज जस्तो संस्कृतिको विकास गर्यो ।
श्रीमतीले श्रीमानको आयू बढोस् भनि व्रत बस्दै गर्दा , श्रीमतीले श्रीमानको आयू बढोस् भनेर किन व्रत बस्दैनन् ? एउटा केटीले राम्रो वर पाइयोस भनि व्रत बस्दै गर्दा , एउटा केटोले राम्रो बधु पाइयोस भनि किन व्रत बस्दैन ? किनकी हाम्रो समाजमा पुरुष सधै पहिलो श्रेणीमा रहन्छ । श्रीमानको आयुले उसको श्रीमतीको रंगहरु निर्धारण गर्दछ ।
हाम्रो सामजिक संरचनामा, पुरुषलाई सधै उत्पादनशील काममा लाग्न प्रेरित गरियो भने , महिलाहरुलाई दबाउनको लागि, अनुत्पादनशील काममा लाग्न प्रेरित गरियो .. जसले गर्दा, महिला बढी शृङ्गारपटार,गरगहना,पूजापाठ, व्रत आदिमा रुमलिरहे । उता पुरुषहरुले उत्पादनशील काममा आफ्नो वर्चश्व जमाए । दिनभरी पानीको थोपा समेत मुखमा नहाली बसेको ब्रतको समाप्तिको सुरुवातमा,श्रीमानको पैतालाको जल खाना सिकाउने हाम्रो समाजले,श्रीमानलाई सधै भगवानको र श्रीमतीलाई सधै उसको भक्त या त उसको दासीको दर्जा दियो । आफ्नै लामो आयुको लागि शरीरलाई कस्ट दिएर ब्रत बसेकी श्रीमतीलाई आफ्नो पैतालाको पानी खान प्रेरित गर्ने श्रीमान कस्तो ? जीवन साथीको नामको लगनगाँठो कसीदिएर , एकलाई अर्काको जिन्दगीको हाकिम बनाउने,समाज कस्तो ?
श्रीमती व्रत बस्दा,श्रीमान आफ्नो श्रीमतीको लामो आयुको लागि व्रत किन नबस्ने ? व्रत बस्ने या नबस्ने निर्णय, जीवनसाथीले एक आपसमा सामिप्यता,सद्भाव,सम्मान र सम्पर्पण दर्शिने गरि किन नलिने ? हाकिम र नोकरको रोलमा जिन्दगी बिताउनु भन्दा सच्चा जीवनसाथीको भूमिका निर्वाह किन नगर्ने ? यसपालीको तीजले कमसेकम सबैमा यो चेत आओस् ।
आफ्नै लामो आयुको लागि शरीरलाई कस्ट दिएर ब्रत बसेकी श्रीमतीलाई आफ्नो पैतालाको पानी खान प्रेरित गर्ने श्रीमान कस्तो ? जीवन साथीको नामको लगनगाँठो कसीदिएर , एकलाई अर्काको जिन्दगीको हाकिम बनाउने,समाज कस्तो ?
Previousगफैमा सीमित भएपछि बाबुरामको पार्टीमा खटपट
Nextनेपाललाई माया नगर्नेले गाली किन गर्नु ?
विश्वमा सबैभन्दा बढी बलात्कार हुने देशहरु
१९ फाल्गुन २०७१, मंगलवार १३:०३
भारतमाथि आक्रमण गर्ने आइएसको योजना
११ मंसिर २०७२, शुक्रबार ०३:३५
फेरी असल मान्छे बन्नुहोस् – सागर प्रसाई
२५ आश्विन २०७१, शनिबार ०९:२४